कृषि संग जोडिएको थारु समुदायले मनाउने “अखारी पुजा” - falaichanews
गह धर्म संस्कृति
कृषि संग जोडिएको थारु समुदायले मनाउने “अखारी पुजा”
रामधुनी । ऐतिहासिक, पौराणिक, साँस्कृतिक रुपमा थारु समुदायले मनाउदै आएको अखारी पुजा असार महिनामा मनाउने गरिन्छ ।
तिथि अनुसार बिशेष असारको औशी पछि अखारी पुजा मनाउने चलन छन् भने असार पुर्णिमा पनि बिशेष महत्वका साथ अखारी पुजा गर्ने गरिन्छ । कसै–कसैले असार महिना चढ्ने बितिकै पुजा गर्ने गर्छन् । तथापी पनि असारको औशी पछि र पुर्णिमामा अखारी पुजा मनाउने धार्मिक मान्यता रहेको छ सो दिन शुभ मानिन्छ ।
बिशेषत आखारी पुजा डिहवार (ग्रामथान) मा मनाउने गरिन्छ । घर घरमा समेत कुल देवतालाई पान पर्सादी चढाएर अखारी मनाउने गरिन्छ । खेत रोपाई सकिए पछि धान बालिमा रोगब्याधि नलागोस, उब्जनीमा बृद्धिको कामना, अत्याधिक बर्षा संगै आउन सक्ने सम्भावित बाढीले गर्दा सर्प बिच्छिको बिगबिगिहुदा सो बाट बच्न, बर्षाले निमत्याउने हैजा रोगबाट बच्न र गाउँटोलमा अदृश्य सक्तिबाट हुन सक्ने हानिबाट सुरक्षाको कामना गर्दै अखारी पुजा गरिन्छ । परा पुर्वकाल देखिनै थारु समुदाय कृषि उपज संरक्षणकालागी अखारी पुजाको महत्व दिएकोले अखारी पुजा कृषिमा जोडिएको मानिन्छ ।
अखारी पुजामा खिर, लड्डु, फलफुल चढाउने परमपरा रहिआएको छ । ग्रामथानमा साँझबाती दियो बालेर पौराणिक लोक भाका, बाध्यबाधनमा झाईल मृदंग बजाउदै धामी खेलेर अखारी पुजाको पुर्णता दिने गरेको छ । पुजामा बोका, परेवा, अण्डा समेत चढाउने मान्यता रहेको छ । अखारी पुजामा टोलभरीका समुदाय प्रसाद ग्रहणगरी समपन्न गर्ने चलन रहेको छ ।
अखारी पुजा बिभिन्न ग्रामथानमा हुने गरेको छ । पुजा लिएका धामी डिहवार थानहरुमा यो पुजा गर्ने गरेको छ । बिच्छु धामी, सौन धामी, बौकाई धामी, जितन धामी लगायत पुजा खाएका धामी डिहवार थानमा बर्षको दुई पटक अखारी र नेमानी पुजा गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
इटहरी वडा नं. ८ टेंग्राटोलका समुदायले बिच्छु धामी टाुलमा बिहिवार पान पर्सा चढाएर अखारी पुजा गरेको साबित्रा चौधरीले जानकारी दिइन् । रामधुनी वडा नं. १ नयाँ टोल भादगाउँमा सौन धामी ग्रामथानमा अखारी पुजागरी लगाएको बालि सुरक्षाको कामना गरेको गहदार सिताराम चौधरी जानकारी दिए । इटहरी चौकमै रहेको बिचछु धामी ग्रामथान यसैगरी थारु टोलका प्रत्येक डिहवार ग्रामथानमा अखारी पुजा मनाएको छ । आजको किसानको आवाज साप्ताहिकमा सुनिल चौधरीले लेखेका छन् ।